Alarobia Antanamalaza Niara-nalevina noho ny fahatapahana lalandra ireo mpivady
Fadiranovana ireo zanaky ny mpivady izay niara-maty. Tsy zakan’ilay renim-pianakaviana ny fahafatesan’ny vadiny izay tapaka lalandra.
Nitambotsotra izy, niakatra tampoka ny tosidrany ka maty teo koa izy. Tamin’ny alarobia heriny no nitranga ny loza roa sosona, tany Antanamalaza, anelanelan’ny kaominina Alatsinainy Bakaro sy Antsampandrano. Teo am-pisakafoana tamin’ny fahoriana ireo mpiray monina no nahare fa maty koa ramatoa.
“Nilaza ny mpikabary taorian’ny nametrahan’ireo mpiray tanana sotro tao an-tsehatra fa ahemotra indray ny fandevenana. Tsy atao io alarobia io satria vao maty teo indray ny andefimandrin-dratompokolahy. Fahatairana ho an’ireo fokonolona tanteraka izany”, hoy ny renim-pianakaviana iray izay avy niatsena teny Alarobia Antanamalaza. Zary nampitera-kovitra tao an-tsena io. Voalazan’ny mpitsabo tany an-toerana fa samy fiakarana tosidra tampoka no nahafaty azy mivady.
Ilay raim-pianakaviana efa tapaka lalandra herinandro mahery mialoha, mba efa nialana nenina fa tsy tana ny ainy. Ity vadiny kosa nisento tokana, tratran’ny fahafatesana tampoka. Raha ny antontanisan’ny Institut Pasteur Avaradoha, anisan’ny mitana lohalaharan’ny taham-pahafatesan’ny Malagasy ity fahatapahana lalandra ity. Ankoatra ny olana ara-tsakafo, heverina ianjadian’ny adin-tsaina noho ny fahasahiranana lalina ny vahoaka Malagasy ka miafara amin’io fiakarana tosidra mahery vaika io.